ဒီစာအုပ်ကို ဆရာ တင်မောင်မြင့် က E.R. Braithwaite ရဲ့ To Sir, With Love ကို ဘာသာပြန်ဆိုထားခြင်း ဖြစ််ပါတယ်။ ဒီစာအုပ်ကို စောရွွေဗိုလ် ကလည်း ချစ်သောဆရာ အမည်နဲ့ ဘာသာပြန်ထားပါတယ်။ ဒီစာအုပ်ကို ၁၉၆ရ ခုနှစ်မှာ မင်းသား Sidney Poitier ရဲ့ သရုပ်ဆောင်မွုနဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား အဖြစ် ဖန်တီးထားပါတယ်။
ဒီစာအုပ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ New Stateman က “ပညာရေး လောကကို ရွုထောင့်သစ်၊ အမြင်သစ်မှ ချဉ်းသပ်ရွုမြင် သုံးသပ်ထားပုံ အလွန်လှသည်။ သူ့၀တ္ထု၏ အတွေးအမြင်မှာ ထူးခြားသည်။ နက်နဲသည်” လို့ မှတ်ချက်ပြုခဲ့သလို Stella Frank in The Sunday Times က “သူ့လို ကျောင်းဆရာတွေ ကမ္ဘာကြီးထဲမှာ အများကြီး ရှိဖို့လိုသည်" လို့လည်း မှတ်ချက်ပြုခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့ပြင် Michael Croft in The Observer က “စိတ်ထား မြင့်မြတ်မွုနှင့် ရင်နင့် ကြေကွဲစရာများကို လက်ဖျားခါလောက်အောင် ရေးဖွဲ့ပြထားသည်။ ယနေ့ခေတ် ကျောင်းသား လောကကို အပီပြင်ဆုံး၊ အနက်ရွိုင်းဆုံး မီးမောင်းထိုးပြထားသည့် စာအုပ်ဖြစ်သည်” လို့လည်း ဆိုထားပါတယ်။
ဇာတ်လမ်းမှာ ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ်အတွင်းမှာ ဗြိတိန် တော်၀င် လေတပ်ရဲ့ Pilot ဖြစ်ခဲ့ဖူးသူ လူမည်းတစ်ယောက် ဖြစ်တဲ့ မစ္စတာ ဘရိတ်၀ိတ်ဟာ Pilot အလုပ်ကနေ ထွက်ပြီး အလုပ်ရှာရင်း လန်ဒန်က ကျောင်းဆရာ လိုနေတဲ့ ကျောင်းတစ်ခုမှာ ကျောင်းဆရာ ဖြစ်လာခဲ့တယ်။
ကျောင်းအုပ်ကြီးနဲ့ ဆရာမတွေဟာ သဘောကောင်း ဖော်ဖော်ရွေရွေ ရှိပေမယ့် ဒီကျောင်းရဲ့ တစ်ယောက် တည်းသော ကျောင်းဆရာက လူမည်းဖြစ်တဲ့ သူ့ကို သိပ်အမြင် မကြည်သလို ငေါ့တော့တော့နဲ့ ဆက်ဆံခဲ့ပါတယ်။
သူ ရောက်လာတဲ့ နေ့မှာပဲ ဖရိုဖရဲနိုင်လှတဲ့ အတန်းရဲ့ အတန်းပိုင် ဆရာတစ်ယောက်ဟာ အတန်းကို ပစ်ပြေးခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့်ပဲ သူဟာ ကျောင်းစာကို စိတ်မ၀င်စားကြတဲ့ လူပေ လူတေလေးတွေရဲ့ အတန်းပိုင် ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။
သူ့ရဲ့ စိတ်ကူးထဲက အတန်းဟာ စားပွဲ ကုလားထိုင်တွေ အစီစီ အညီညီ။ ကျောင်းသူ ကျောင်းသားတွေက သိမ်သိမ်မွေ့မွေ့ ဗိုင်းကောင်းကျောက်ဖိလေးတွေ။ ဒါမယ့် သူကြုံရတဲ့ အတန်းက တိရစ္ဆာန် လေှာင်အိမ်နဲ့ တူတဲ့ အတန်းမျိုး …
ဖြစ်လာတော့လည်း မလေှျာ့တဲ့ ဇွဲနဲ့ ကျောင်းသား ကျောင်းသူတွေရဲ့ ဖြစ်သလို အပေအတေ ၀တ်စားပြီ တစ်ကိုယ်ရည် သန့်ရှင်းမွု အားနည်းကြတာတွေက စတင်ပြုပြင်ခဲ့ပါတယ်။ ကျောင်းသား ကျောင်းသူတွေ လိမ္မာ ယဉ်ကျေး လာအောင် အစွမ်းကုန် ကြိုးစားခဲ့တဲ့အတွက် နောက်မှာတော့ ကလေးတွေဟာ သူ့ရဲ့ စာသင်ကြားမွုကို နှစ်သက်လာကြပါတယ်။
ဖတ်နေရင်း ကျွန်တော် တာဝန်ကျတဲ့ တံငါရွာလေး ငါးညှီရနံ့ သင်းကြိုင်နေတဲ့ ကလေးတွေကိုတောင် သတိရမိသွားတယ်။ ကျွန်တော် တာဝန်ကျတဲ့ ရွာလေးဟာလည်း စာအုပ်ထဲက ကျောင်းသားတွေလိုမျိုးပါပဲ။ ကလေးအများစုက တက္ကသိုလ်တွေ တက်ပြီး ပညာရေး ဆုံးခန်းတိုင်မယ့် ကလေးတွေ မဟုတ်ပါဘူး။ တချို့ကလေးတွေဆို မူလတန်း ပညာရေးမပြီးခင်တောင် ပင်လယ်ထွက်ရတဲ့ ဘဝတွေပါ ????????
မစ္စတာ ဘရိတ်၀ိတ်ဟာ သမားရိုးကျ စာသင်နည်းက ဖောက်ထွက်ပြီး ထိုခတ်ထိုအခါက မရိှသေးတဲ့ စာသင်ဟန်ဖြစ်တဲ့ ကလေးတွေရဲ့အတွေးအခေါ်ကို ဖွင့်ပေးကာ ပူးပေါင်းပါ၀င် ဆွေးနွေးစေတဲ့ C.C.A သင်နည်းတွေကြောင့် ကျောင်းသား ကျောင်းသူတွေဟာ သူ့အပေါ်မှာ ချစ်ခင် တွယ်တာလာကြပါတယ်။
ဇာတ်သိမ်ခန်း အဖြစ် ကျောင်းပိတ်ခါနီး ခရစ္စမတ် ကျောင်းကပွဲ အပြီးမှာ ကျောင်းသား ကျောင်းသူတွေရဲ့ လက်ဆောင်တစ်ခုနဲ့ ဇာတ်ရှိန်ကို မြှင့်လိုက်ပါတယ်။ လက်ဆောင် အထုပ်ကြီးက အထဲမှာ ဘယ်အရာတွေ ပါသလဲ မသိရှိရပေမယ့် လက်ဆောင်ထုပ်ပေါ်က "အချစ်များစွာနဲ့ပါဆရာ " ဆိုတဲ့ စာတန်းနဲ့အတူ စာတန်း အောက်နားမှာ ထိုးထားကြတဲ့ အတန်းသား အားလုံးရဲ့ လက်မှတ်တွေဟာ မစ္စတာ ဘရိတ်၀ိတ် (ဆရာ ဘရိတ်၀ိတ်) အတွက် ဒီတစ်သက် မေ့နိုင်မှာ မဟုတ်တော့ပါပေ။
လူမျိုးရေး ခွဲခြားမွု၊ ဆရာရဲ့ အတုယူဖွယ် ကြိုးစားအားထုတ်မွု၊ ကျောင်းဆရာဆိုတာ စာသင်ရုံတင် မဟုတ်ဘူး ဆိုတာတွေ၊ မေတ္တာတရားတွေကို ဒီစာအုပ်မှာ မြင်တွေ့ရမှာပါ။
ဆရာ တင်မောင်မြင့် ရဲ့ "အချစ်များစွာနဲ့ပါ ဆရာ" စာအုပ်ကို တန်ဖိုး ၃၀၀၀ ကျပ်နဲ့ ဇွန်ပွင့် စာအုပ်တိုက် ကနေ ၂၀၁၆ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလမှာ ပြန်လည် ထုတ်ဝေထားပါတယ်။
Publisher Name: ဇွန်​ပွင်​့စာအုပ်​တိုက်​
Publisher Address: အမှတ်​(77/D)ဓမ္မပါလလမ်​း၊ဗဟန်​းမြို့နယ်​၊ရန်​ကုန်​မြို့။
Publisher Phone Number: 095098606,095043164